ဦးဝီရသူ သည် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်၏ ပြောဆိုမှုများသည် ငြိမ်းချမ်းရေးတရားများသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဟောပြောမှုများသည် မွတ်ဆလင်နှိပ်ကွပ်ရေးကို လှုံ့ဆော်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ မွတ်ဆလင်များသည် ရန်သူများဖြစ်ကြသည်ဟု ညွှန်းဆိုထားသည်။
၁၀ ဇူလိုင် ၁၉၆၈&#၁၆၀;(၁၉၆၈-၀၇-၁၀) (အသက် ၅၂)
ဦးဝီရသူသည် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအပေါ် မဖွယ်မရာစကားလုံးများသုံးနှုန်းပြောဆိုခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော် တရားရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးစသည့်ကဏ္ဍများမှ တာဝန်ရှိသူများအပေါ် အကြည်ညိုပျက်အောင် ပြောဆိုမှုကြောင့် အနောက်ပိုင်းခရိုင်ဒုအထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစန်းမင်းမှ တရားလိုပြုလုပ်၍ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေ မှုပုဒ်မ ၁၂၄-က ဖြင့် တရားစွဲဆိုရန် ၂၀၁၉ မေလ ၂၈ ရက်တွင် တိုင်တန်းထားသည်။
ဦးဝီရသူသည် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရပြီးနောက် ၁၇ လကြာ ပုန်းရှောင်နေရာ ၂၀၂၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်နေ့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ လာရောက် အဖမ်းခံခဲ့သည်။
ဆရာတော်ကို ၁၃၃၀ ပြည့်နှစ် ဝါဆိုလဆန်း(၂)ရက်၊ (၁၉၆၈−ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၂၆)ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တွင် မန္တလေးတိုင်း၊ကျောက်ဆည်မြို့၊ အောက်ချိုက်ရပ် ခမည်းတော် ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ မယ်တော် ဒေါ်တင်တင်ဦးတို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်နာမည် ဝင်းခိုင်ဦး ဖြစ်သည်။ မွေးချင်းမောင်နှမ ရှစ်ယောက်ရှိသည့်အနက် ဒုတိယမြောက် သားဖြစ်သည်။ ဖခင် ဖြစ်သူမှာ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကျုံမငေးမြို့ ဇာတိဖြစ်သည်။ စက်မှုလယ်ယာဌာနတွင် အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ကာ လယ်ထွန်စက် မောင်းသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဦးခင်မောင်ဝင်းသည် ကျောက်ဆည်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့စဉ် ဒေါ်တင်တင်ဦးနှင့် အိမ်ထောင်ကျကာ မောင်ဝင်းခိုင်ဦးကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးဖွားပြီးနောက် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ကျုံမငေး၊ မြောင်းမြ၊ ဝါးခယ်မ စသည့်မြို့များသို့ ထပ်မံ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရာ သူ၏ ညီနှင့် ညီမများကို ယင်းမြို့များတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မောင်ဝင်းခိုင်ဦး ကိုယ်တိုင်လည်း မြောင်းမြမြို့တွင် သူငယ်တန်း တစ်နှစ်နေခဲ့ဖူးသည်။ ယင်းနောက် ဖခင် အစိုးရဝန်ထမ်းမှ အနားယူကာ အခြေချနေထိုင်ရန် ကျောက်ဆည်မြို့သို့ အပြီးပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သည်။
ကျောက်ဆည်မြို့ အမှတ် (၆) အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းနှင့် အမှတ်(၁) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတို့တွင် ၈ တန်းအောင် သည်အထိ ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး ၁၃၄၆-ခု၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် (၁၄)ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ရွှေလှံတောင်ဆရာတော်ကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြုပြီး သီလရှင် ဆရာကြီး ဖွားမာလာထေရီ၏ ပစ္စယနုဂ္ဂဟခံယူကာ ရှင်သာမဏေဖြစ်ခဲ့ပြီး ပရိယတ္တိစာပေများကို ဆည်းပူးလေ့လာခဲ့သည်။ ၁၃၄၇ အောင်-ဇေ-ယျ-တုနှစ် ပထမဝါဆိုလဆန်း ၁၅ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကျောက်ဆည်မြို့၊ မင်းကုန်းမဟာစာသင်တိုက် ပဓာနနာယက ဆရာတော် ဦးဇနိတာဘိဝံသထံတွင်ရောက်ရှိကာ ပရိယတ္တိစာပေကိုအခြေခံမှစပြီး ဝိနည်းငယ်လေးစောင် ပါရာဇိကပါဠိတော်ပါ စိတ်ပါဠိ တော်နှင့် ပထမပြန်ဆိုင်ရာကျမ်းဂန်ကြီးငယ်တို့ကို သင်ယူခဲ့သည်။ ၁၃၅၀ ပြည့်နှစ် ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကျောက်ဆည်မြို့၊ လေသာကျောင်းတိုက်ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဦးဇဝနဗုဒ္ဓိ ကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြုပြီ ဦးစံထွန်း ဒေါ်မြချစ်နှင့် ဦးသန်းဝင်း + ဒေါ်အေးချိုတို့၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟကိုခံယူကာ ရဟန်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် နာယက ဆရာတော် ဦးဝီရသူသည် ၁၃၆၁ ခု၊ (၉၃) ကြိမ်မြောက် ပရိယတ္တိသာသနဟိတ (သကျသီဟ) စာမေးပွဲသီးခြားစာချတန်း၌ အဋ္ဌကထာသုံးကျမ်းကို ဖြေဆိုအောင်မြင် တော်မူသဖြင့် "ပရိယတ္တိသာသနာဟိတ (သကျသီဟ) ဓမ္မာစရိယဘွဲ့" တံဆိပ်တော်ကို ဆက်ကပ်ပူဇော်ခံယူခဲ့သည်။ "အဘိဝံသ(မျိုးဆက်သစ်) ဘွဲ့" ရရှိခဲ့သည်။
တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း၏ ဖော်ပြချက်
တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်း ကို ကန့်ကွက်မှုများ
၂၀၁၃ ခုနစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲနှင့် ထုတ်ဝေသော Time တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းတွင် "The Face of Buddhist Terror" ဟု ဦးဝီရသူ၏ ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ဖေါ်ပြခဲ့သော ဟဲန်နာ ဘိချ် Hannah Beech ၏ "When Buddhists Go Bad" ဆောင်းပါးအား ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး က၂၀၁၃ ခုနစ်၊ဇွန်လ (၂၃) ရက် ရက်စွဲနှင့် ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန ကလည်း အလေးအနက်ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။(၉၆၉) အမှတ် တံဆိပ် သည်လည်း ဗုဒ္ဓ ၏ ဂုဏ်တော်( ၉) ပါး၊ တရားဂုဏ်တော် (၆) ပါး၊ သံဃာ့ ဂုဏ်တော် (၉ ) ပါးကို ကိုယ်စားပြုသည်... မြန်မာ့ လူ့ဘောင် အတွင်း မလိုလားအပ်သော ပဋိပက္ခတွေ ဆက်မဖြစ်ဖို့ အားလုံး စုပေါင်းပြီး ဘာသာ တွေကြား အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက် နေသည်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အတွက် ကန့်ကွက် သည်..ဟု ဆိုသည်။ ၉၆၉နှင့် ဆရာတော် ဦးဝီရသူကို သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန သာသနာရေး ဝန်ကြီး ဦးဆန်းဆင့်မှလည်းထောက်ခံခဲ့သည်။ Time တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ အစိုးရကကလည်း ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ banned ခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက် တွင် မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်တွင် ဆရာတော် ဦးဝီရသူ တရားဟောနေစဉ် ဗုံးကွဲမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် (၅) ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရခဲ့သည်။ ယင်းအကြမ်းဖက်မှုကို အစွန်းရောက် အစ္စလာမ် အကြမ်းဖက်သမားများက ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဦးဝီရသူက စွပ်စွဲသည်။  မစိုးရိမ်တိုက်သစ် နာယက ဆရာတော် အမျိုးသားရေးဝါဒီ ဦးဝီရသူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေ ထပ်မဖြစ်အောင် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များနှင့် လက်တွဲပြီး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ် ကေသာရာမ ကျောင်းတိုက်တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၌ ကျင်းပသော အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည်။ မွတ်ဆလင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး အဓိကရုဏ်းတွေ တားဆီးဖို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အစ္စလာမ် အကြမ်းဖက်သမားများ၏ ခြိမ်းခြောက် ခံရမှုများနှင့် မပတ်သက်ဘူးလို့ ဦးဝီရသူက ဘီဘီစီကို ပြောသည်။ ဦးဝီရသူသည် မွတ်ဆလင်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေရေးအတွက် လုပ် မည်ဟု ပြောခြင်းသည် ၂၀၁၂ ခုနစ်ကတည်းကပင် ဖြစ်သည်။
Thomas Fuller။ "Extremism Rises Among Myanmar Buddhists"၊ 20 June 2013။
Sectarian divide in Myanmar driven by radical Buddhism - Hindustan Times Archived 13 July 2013 at the Wayback Machine.
ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံရပြီး ရှောင်တိမ်းနေသူ ဦးဝီရသူ (ခ) ဦးဝိစိတ္တာဘိဝံသ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံလာအဖမ်းခံ
ကျော်ဇေယျာထွန်း။ တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် တစ်ယောက်။
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 11 May 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 30 September 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။9August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Alan Strathern။ "Why are Buddhist monks attacking Muslims?"၊ 1 May 2013။
Kate Hodal။ "Buddhist monk uses racism and rumours to spread hatred in Burma"၊ 28 April 2013။
Gianluca Mezzofiore။ "Fanatical Buddhist Monk Saydaw Wirathu Calling for Boycott of Myanmar Muslims"၊ 26 March 2013။
Myanmar Theravada Buddhism News, Dhamma Web။ 10 August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 10 May 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wirathu receives Freedom of Religion award. - YouTube
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 8 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲက်င္းပ (Chan Mya) | MoeMaKa Burmese News & Media။ 13 August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
mmdailystar.com -&nbspmmdailystar Resources and Information။9July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Hla Oo's Blog: Meik-hti-lar Burning By Race Riots!
Celebrities Helping Meikhtila Riot Victims - YouTube
Interview of U Win Htein(NLD Party)-23.march.2013 - YouTube
Min Ko Naing's View On Violence in Meikhtila - YouTube
PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: RFA မွ ထုတ္လႊင့္သည့္ မိတီၳလာၿမိဳ႕ ျမင္ကြင္း
Hla Oo's Blog: Boycott Muslim Businesses: Nationalist-Monk Shin Wirathu
Hla Oo's Blog: All 14 Huge Mosques In Meikhtilar Destroyed Except One!
true story of Meik-hti-lar incident - CNN iReport။ 25 June 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Wirathu Archives - DVB Multimedia Group
Dhamma e-Book written by Dr Ashin Dhammapiya
Monks promote law restricting interfaith marriages- DVB Multimedia Group
Hannah Beech။ "The Face of Buddhist Terror"၊ 1 July 2013။
Wirathu lashes out at Time magazine- DVB Multimedia Group
တိုင္းမ္မဂၢဇင္းရဲ့ မ်က္ႏွာဖုံး ေဆာင္းပါး ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ လက္မခံ
TIME Magazine - U.S. Edition - March 10, 2014 Vol. 183 No. 9
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 26 June 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Extremist Myanmar monk lashes out at Time after being called Buddhism’s ‘face of terror’ - The Washington Post။ 24 June 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းကို အစိုးရ ကန့်ကွက် - BBC News မြန်မာ
The Face Of Buddhist Terror: Sri Lanka To Ban Time Magazine – Colombo Telegraph
Myanmar Local News: ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ားမွာ ၉၆၉ ေၾကာင့္ မဟုတ္ဟု သာသနာေရးဝန္ႀကီးေျပာ
မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ အစြန္းေရာက္လက္ခ်က္ဟု ဦးဝီရသူဆို
ဆန်းထူးအောင်။ ဦးဝီရသူအား နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့က တစ်နှစ် တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့မှုအပေါ် ဦးဝီရသူ အနေဖြင့် လူမှုကွန်ရက် အင်တာနက် စာမျက်နှာများနှင့် သတင်းမီဒီယာများတွင် ဆန့်ကျင်ဝေဖန် ပြောဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်လာပါက ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူမည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်။ Eleven Media Group။ ၁၆ မတ် ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဟိန်းသာ၊ ရဲနိုင် (၁၂ မတ် ၂၀၁၇). "ဦးဝီရသူကို တရားဟောခွင့် တစ်နှစ်ပိတ်ပင်". ၇ ရက်နေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၃၉၀). Retrieved on ၁၆ မတ် ၂၀၁၇.
မင်းသူဝင်းထွဋ်။ အိမ်မဲမြို့နယ် သီးကွင်းကျေးရွာတွင် ဆရာတော်ဦးဝီရသူက ပါးစပ်အား စတေကာတိပ်များနှင့်ပိတ်ကာ တရားခွေဖွင့်၍ တရားပွဲပြုလုပ်။ Eleven Media Group။ 15 March 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၆ မတ် ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"ဦးဝီရသူ၏ ဒုတိယအကြိမ် ဝစီပိတ်တရားပွဲ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ပြုလုပ်" (၁၆ မတ် ၂၀၁၇). ၇ ရက်နေ့စဉ်သတင်းစာ (၁၃၉၄). Retrieved on ၁၆ မတ် ၂၀၁၇.